Sida loo kala shaandheyn karo sawir ku yaal Photoshop, Sawir-qaade, Gimp iyo khadka tooska ah ee internetka | Abuurista khadka tooska ah
Markii aan ku daaweyno sawir leh pixels, wax ka beddelkeeda aad ayey u adag tahay. Mar alla markii aan cabirno cabirkeeda asalka ah, dib ugu noqoshada iyadoo la ballaadhinayo waxay noqoneysaa wax aan macquul ahayn. Maaddaama ay ka buuxsantay bitmap-ka oo ay noqotay wax aan la akhriyi karin oo aan loo isticmaali karin in loo isticmaalo. Taasi waa sababta u ah in sawir la qaado ay lagama maarmaan u tahay kiisaska qaarkood. Si tan loo sameeyo, waxaa jira qaaciidooyin badan. Qaar aad ufudud iyo kuwo kale oo inyar uun ka adag, oo aad natiijada kula jaanqaadi karto sidaad jeceshahay.
Haddii internetka aan eegno sida loo sawiro sawirada, casharro badan ayaa soo bixi kara ama casharro fiidiyoow ah oo wax ka qabta, laakiin midkoodna kuma siinayo dhammaan xulashooyinka suurtogalka ah. At Creativos waxaan ognahay in qof kastaa leeyahay qalab iyo fursado. Taasi waa sababta aan u siin doonno tusaalooyin dhowr ah iyo qalab kala duwan oo ku saabsan sida loo sameeyo. Adiga si aad u gaarto midkoodna.
Ma rabtaa inaad ogaato sida loo sawiro muuqaalka Sawirka? Photoshop? Ama, laga yaabee, ma u baahan tahay inaad ku sameyso khadka tooska ah? Waxaan ka wada hadli doonnaa siyaabaha kala duwan ee loo sameeyo halkan.
1 Sida loo tijaabiyo muuqaalka Photoshop
2 Sida loo tijaabiyo muuqaalka sawirka Adobe Illustrator
3 Sida loo tijaabiyo sawirada Gimp
4 Sida loo sawiro muuqaalka khadka tooska ah
5 Ku wareeji sawirada Corel Draw
Sida loo tijaabiyo muuqaalka Photoshop
Waxaan dooraneynaa sawir cusub oo aan dooneyno inaan vector ka dhigno. Hor u eegida natiijooyinka marka hore, waxay kuu sahlanaan doontaa adiga inaad ogaato sida ay u shaqeyso si aad ula shaqeyso fikraddaas. Sidaa darteed, tallaabada ugu horreysa ee aan qaadi doonno waa inaan nuqul ka sameysano lakabka. Inaad ka tagto asalka oo aad la shaqeyso nuqulka, haddii ay dhacdo inaan dib ugu noqonno. Tallaabadani waxay had iyo jeer waxtar u leedahay dhammaan mashaariicda aad qabato.
Had iyo jeer nuqul lakabka shaqeeya. Haddii aan khalad sameyno si toos ah ayaan u soo laaban karnaa annaga oo aan lumin shaqadeenna
Aynu aadno Sifeeyaha> Dareemida> Gaussian blur. Waxay kuxirantahay tayada sawirka waa inaan kaduudnaa wax yar ama kayar, markaa waa inaad hubisaa. Isku day inaad u ekaato sawirka soo socda. Weli, waxaan dhigayaa lix dhibcood. Sidoo kale qodobkani wuxuu ku xirnaan doonaa masaafada ama u dhowaanshaha sawirka, si loo faahfaahiyo qodobbada yar ee muuqda.
Tallaabada xigta iyo lakabkan horeyba u xumaaday, waxaan tagnaa qaabka isku-dhafka sawirka. Waxaan ku dhex ridnay 'Qeybi'.
Hadda waxaan abuureynaa lakab buuxin ama hagaajin leh 'marinka' marinka. Tan, waxaan ku dari doonnaa buuq si aan u iftiiminno faahfaahinta sawirka. Dhib malahan hadaan buuq fara badan ku darno salka, maxaa yeelay waan ka saareynaa. Waxa muhiimka ah ayaa ah in faahfaahinta sawirka si wanaagsan loo calaamadeeyay. Waxaan nuqul ka sameyn doonaa tillaabooyinka lagu abuuray toobiyeyaasha soo socda:
Daaqadaha: Ctrl + Alt + Shift + E
MAC OS: Cmd + Alt + Wareejin + E
Waxaan markaa u aadnay xulashada> midabbo kala duwan. Sawirka horudhaca ah waa inaan gujino oo wuxuu sameyn doonaa isbadal. Halkaas ayaan ku dejinay dulqaad inta badan u dhexeeya 9 iyo 20. Laakiin si aad u saxdo, hubi inay jiraan pixels ku filan sawirka. Waxaan dooranay ikhtiyaarka 'maalgashiga' oo guji OK. Tani iyada oo aan loo baahnayn in la siiyo qaab kale.
Waan arki doonaa sida sawirkeenu u calaamadeysan yahay. Waxaan dooranaynaa aaladda Lasso oo midig u gujiso sawirka «Samee waddada shaqada». 2 dulqaad pixel iyo voila. Si aan tan u kaydinno waxaan tagnaa Tafatir> Qeex qaabka qaabdhismeedka.
Sida loo tijaabiyo muuqaalka sawirka Adobe Illustrator
Xaaladdan oo kale, sawirqaade waa barnaamij takhasus u leh vektorka. Tan iyo markii, ka duwan Photoshop, waxay si toos ah ula shaqeysaa iyaga oo aan la shaqeyn pixels. Marka way fududaan doontaa sharaxaadda.
Gali sawir Sawirka Faylka> Furan. Markaad sawirkaaga geliso Sawirka, waxay u muuqan doontaa mid la xushay, haddii kale, guji uun. Iyada oo sawirka la xulay, waa inaad tagtaa menu-ka daaqadda oo aad gashaa ikhtiyaarka "Sawir-raadinta". Marka xigta, daaqada qalabka Raadinta Sawirka ayaa soo muuqan doonta, halkaas oo aad ku arki karto xulashooyin taxane ah oo aad ku habeyn kartid hadba sida aad u kala jeceshahay ama baahidaada.
Marka xigta, waa inaad tagtaa Setet Settings, halka aad ikhtiyaar ugu leedahay inaad ku doorato nooca tayada vectorization ee sawirkaaga. Sidoo kale gudaha 'Threshold' waxaad ku hagaajin kartaa tayada qaab raaxo leh, sidoo kale, qaabka midabka, waxaad dooran kartaa miisaanka culeyska ama B / W.
Munaasabadan, waxaad sii wadi kartaa inaad doorato Sawirka Hi-Fi ee ku jira horudhaca, si toos ah u fiirso shaqada barnaamijku bilaabo inuu ku qabto sawirkaaga. Nidaamkani wuxuu qaadan karaa dhowr ilbiriqsi iyadoo kuxiran awoodda kombiyuutarkaaga iyo kakanaanta sawirka.
Waxaad heli doontaa sawir ay horeyba u shaqeeyeen softiweerka muujiyuhu oo waxaad aadeysaa baarka midabka si loo helo tayadiisa. U habee dhadhanka, sawir kasta wuu ka duwanaan karaa. Marka waa inaad isku daydaa illaa ay ka jeceshahay. Qaybtani waxay ka hadlaysaa sawirka iyo qofka. Kadib waxaad aadeysaa menu-ka 'Object' waxaadna dooran doontaa 'Expand'. Halkaas waxaad kuheleysaa sawirkaaga loo beddelay.
Sida loo tijaabiyo sawirada Gimp
Mid ka mid ah siyaabaha lagu sawiro sawirka badanaa waa qalabka qalinka. Qaabkani waa mid casri ah oo madax xanuun badan siiya. Qaarkood waxay yiraahdaan in sidan loo sameeyo oo loo beddelo sawir-qaadasho maahan vector. Taas oo qeexitaankeeda vectorization ay run noqon karto. Maaddaama ay isku dayeyso inay beddesho sawirka cabbirka iyada oo aan luminaynin tayada.
Gimp waxaan u isticmaali karnaa foomkaan waxa loogu yeero 'Digitize the image', laakiin sinnaba maahan, marka la ballaadhinayo ama la yareynayo sawirka weli wuu jiraa. Waxay wali umuuqataa muuqaal yar. Xalka tan waxay noqon kartaa in lagu yareeyo qalabka 'Gaussion blur' in si weyn loo yareeyo pixelation. Markaan diirada saarno, waxaan codsaneynaa dhexdhexaad 'Marxalad'. 120/255 ka badan ama ka yar oo waxay noqon doontaa wax sida vectorized ah.
Si loo hagaajiyo sawirkan, waxaan aadi karnaa aaladaha soo socda ee vectorization-ka. Oo iyaga ku badbaadi qaab .svg ah si loogu isticmaalo aalad kasta.
Sida loo sawiro muuqaalka khadka tooska ah
Tani waa habka ugu fudud ee lagu sawiro sawirka. Waxaa jira bogag badan oo loogu talagalay tan. Kaliya waa inaad raacdaa seddex talaabo oo fudud. Marka hore, xulo sawirka laga soo dejiyay kombiyuutarkaaga oo ku dheji shabakadda. Badanaa waxaa jira astaamo 'Soo rar'. Sawirkaani wuxuu mararka qaar yeelan doonaa meel kooban oo ah 1MB ama 2MB ugu badnaan. (Taasi waa sababta aysan had iyo jeer u aheyn ilo waxtar leh) Waxaad calaamadeyneysaa nidaamka vectorization ka dibna waxaad soo dejineysaa qaab .svg ah. Sidan ayaad ku heli doontaa sawirkaaga vectorized. Ma leh cilmi dheeraad ah.
Liistada soo socota waxaan ku siin doonaa kuwa ugu badan ee lagula taliyay inaad u adeegsato qaabkan.
Degelkani ma laha shaqooyin dheeri ah. Sidii aan ku sheegay hordhaca, diyaari, soo rar oo soo dejiso. Diyaar.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran uguna badan ee lagula taliyo. Vectormagic waxay leedahay ikhtiyaarro badan, sida tayada faahfaahinta iyo midabada. Wax ka beddel natiijada, ka saar asalka ... iyo kuwa kale.
Mar labaad waxaan haysanaa qalab noo ogolaanaya inaan ka tagno waxoogaa yar oo muuqaal vectorized ah laakiin aan ixtiraamno midabada. Sidoo kale waa suuragal in sawirro laga helo khadka tooska ah oo aan ahayn oo keliya kuwa maxalliga ah. Haddii kale ma awoodi karno inaan fulino hawlo kale oo dheeri ah: mana tifaftiri karno dulucda, ama midabada, ama sooyaalka ama waxna.
Ku wareeji sawirada Corel Draw
Corel Draw, oo ay weheliso vectorization-ka khadka tooska ah, ayaa laga yaabaa inay tahay aaladda ugu fudud. Haddii aan u dooranno sawir sidii hore ee aan ku samaynnay 'Tarantino' oo aan u kordhinno kan asalka ah, waxaan arki doonnaa pixelation. Hadda waxaan ku soo bandhigi doonnaa Sawirkeenna Corel.
Mar alla markii aan helno, waxaannu dooneynaa 'vectorise a bitmap' (trace bitmap); 'Outline raad' iyo 'astaan ​​faahfaahsan' (Astaan ​​faahfaahsan). Sawirka bidix sawirka asalka ah ayaa kasoo muuqan doona dhanka midigna sawirka vectorized. Halka aan ka hubin karno sida pixels-ka looga saaro. Mar dambe Dabcan, waxaa jira goobo sare oo faahfaahin dheeraad ah xitaa kuxiran sawirka. Faahfaahin, jilicsanaanta, geesaha, iyo faahfaahinta midabka. Markaad ku qanacdo, guji 'OK'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida sawir loo kiciyo
Hagaag, waa inaan iraahdaa hal shay, Fantastic, waxaan lashaqeeyaa Photoshop iyo autocad, waqtigaan kusugnaa qaab lagu sawiro iyo vectorizations, laakiin mahadsanida daabacaaddaada awoodey inaan hadafka gaaro.
Jawaab ku sii Antonio García Rodríguez